Alahady 13 Oktobra 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
Fihaonambe'ny Synoda-paritany Antananarivo Andrefana SPAA10 - Kianja Analitsara Ambohitrimanjaka
" Maniria ny haminany"
« Dia nankany Naiota any Rama Saoly, ary tonga tao aminy koa ny Fanahin'Andriamanitra, dia nandroso izy sady naminany teny am-pandehanana ambara-pahatongany tany Naiota any Rama. » (1 Samoela 19:23)
Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa tontosa soamantsara , ny fihaonambe-II FJKM SPAA-10 izay natao teny Ambohitrimanjaka. Ny Asabotsy 12 Oktobra tamin’ny 7 :30’ maraina no natao ny fihaonamben’ny SEFALA izay notarihin’ny Mpitandrina Rasolohelison Lalatiana, natao tamin’izany koa fandaminana ny amin’ny famoahana amin’ny 01 Novambra. Taorian’izay, tamin’ny 9 ora no niroso tamin’ny fametrahana ara-pomban’ny Fiangonana ireo Birao SPAA-10 nohavaozina izay notarihin’ny Mpitandrina Razafindramanitra Nestor, tao ihany koa ny tantaram-piangonana FJKM izay niangalian’ny Mpitandrina Maholy. Alim-piderana no namarana izany rehetra izany.
. Ny alahady 13 Oktobra kosa indray dia Fotoam-pivavahana teny amin’ny kianja filalaovam-baolina. Nitarika : Razafindramanitra Nestor, Mpitandrina, izay filoha Mpanampy voalohany BR SPAA10 ; Nitoriteny : Zarazaka Jean-Louis, Mpitandrina, Filoha Mpanampy voalohany BMF. Nifototra tamin’ny perikopa « Maniria faminaniana » na ny « asan’ny Fanahy Masina tarafina amin’ny faminaniana tao amin’ny Fiangonana voalohany » ny toriteny : 1 Samoela 19 :19-24. Ny Mpaminany dia olona natao hampita mivantana ny Tenin’Andriamanitra. Asan’ny Fanahy Masina ny faminanian’ny Fiangonana. Manova olona ny Fanahin’Andriamanitra. Meteza ho mpaminany, olom-boavidy ianao, mitenena ao ambanin’ny Fanahy Masina, meteza ampitenenan’ny Fanahy Masina. Avy aiza ny « mission » ampanaovina anao ?
Nisaoran’ny mpitarika ireo nanatrika na ireo solon-tenam-panjakana izay terak’Ambohitrimanjaka na ny filohan’ny FJKM teo aloha : Rasendrahasina Lala mivady, izay tonga nanome voninahitra an’Andriamanitra sy ireo rehetra tonga nanatrika. Nisy ny rakitra ho fandraisana anjara ho an’ny asam-panorenana atrehin’ny SPAA-10. Tsy adino koa ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Nolazaina tamin’ny raharaham-piangonana ny nahalasan’ny Mpitandriana Ramino Paul Abraham, sy ireo fandaminana ny amin’izany, nentina am-bavaka ny fianakaviany.
Nisaoran’i Alain Razafindratrimo izay solon-tenantsika ao amin’ny SPAA-10 ireo solon-tenan’ny Fitandremana Amparibe izay tonga nanatrika ity fihaonambe SPAA-10 faharoa ity.
Araky ny tapaka tamin’ny KL/SP dia mihidy avokoa ny fiangonana eto anivon’ny SPAA 10 amin’io fotoana io .
Voninahitra anie ho an’Andriamanitra irery ihany.